Ity no mety ho fakantsary amin'ilay iPhone 7 Pro | Avy amin'ny mac aho
Ato anatin'ny dimy andro dia hiraikitra amin'ny solosaina na ny televizionantsika amin'ny Apple TV isika ary ireo fivoahana izay saika isan'andro dia mahatonga antsika hieritreritra fa manomana zavatra tsara i Apple. Tsy fantatra mazava raha amin'ny manaraka Keynote ho an'ny 21 martsa iPhone vaovao dia hampidirina miaraka amin'ny iPad vaovao, fa ny itadiavana azy dia tsy misy tsiambaratelon'ny olona.
Herinandro vitsivitsy lasa izay, ny zavatra heverina fa vatana unibody nohavaozina an'ny iPhone 7 sy 7 Plus vaovao dia tafaporitsaka raha toa ka antsoin'izy ireo izany amin'ny farany. Ny antennas, izay ny tsipika aoriana izay Tsy misy olona tia ny fomban'izy ireo amin'ny fitaovana, nihena izy ireo ary izao kosa dia ny sisiny ambony sy ambany ihany no hipetrahany.
Na izany aza, ny tsaho izay nanjary nanjary zava-dehibe kokoa dia ny fahatongavan'ny fakantsary roa ho an'ny iPhone ho avy. Ny voalaza ao amin'ireo bilaogy manokana manam-pahaizana eto amin'ny firenena dia tsy fantatra mazava raha hipetraka eo amin'ny diagonal roa amin'ny fàfana ity fakantsary ity, izay maodely mahazatra sy Plus ankehitriny ary mety hahatratra ny Diagonal 5.5-inch, Ny fanaovana ny iPhone 7 Plus dia azo antsoina hoe iPhone 7 Pro ary mifanaraka amin'izany ny anarana amin'ny iPad Pro.
Raha ny hatevin'ny terminal dia azontsika atao ny manamarika fa hihena indray izy io, mijoro amin'ny zavatra hafa ary tsy latsaky ny 6.1 mm, iray milimetatra ambany noho ny andiany 6, izay nijoro tamin'ny 7.1mm. Raha jerena izany, ny zava-drehetra dia manondro fa ny taranaka iPhone manaraka dia tsy hanaisotra ny "voa" manaraka. Araka ny hitanao amin'ny inona Mety ho sary tena izy na fandikana tsara ny foto-kevitra na ny zava-misy amin'ny fakantsary roa resahintsika.
Miaraka amin'ity fakantsary roa ity, ny zavatra tadiavina dia ny telefaona amin'ny alàlan'ny rindrambaiko sy ireo teboka samihafa afaka nanao ny vokany mitovy izay azo tratrarina amin'ny solomaso telephoto amin'ny fakan-tsary reflex.
Ankehitriny mba hikororohana ny curl, raha mijery akaiky ny sary ampiarahanay ianao dia afaka mahita izay mety ho Smart Connector, navoaka niaraka tamin'ny iPad Pro, fa tamin'ny iPhone. Ho hitantsika izay marina amin'ny zavatra rehetra noresahintsika ary raha manana io fakantsary io amin'ny farany, f / 1.7 farafaharatsiny, mifanitsy amin'ny Samsung S7.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ity no mety ho fakantsary amin'ilay iPhone 7 Pro honohono
Izay rehetra fantatsika hatreto momba ny iPad Air 3 vaovao